श्रीदेवीकी छोरी जान्ह्वी कपुरमा अचानक चढेपछि… – News Nepali Dainik
मंगलबार १४ मंसिर २०७८
मलेसिया रोजगारीको बाटो खुल्यो, लागेन शून्य लागतको टुंगो
रमेश प्रसाई र नन्दा शाहीलाइ पुत्री लाभ
म दुईवटा श्रीमान राख्न चाहान्छु, के मान्छ त यो समाजले ?
हिम्मतवाला वडाध्यक्ष जसले लगाए भारतसँग जोडिएको सीमामा काँडेतार !
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आयो यस्तो खवर , कारबाहीमा पर्नुहोला ( पढ्नुहोस् )
जापानद्धारा विश्वभरबाट बिदेशी प्रवेशमा रोक, खुलाएको तीन साता वित्न नपाउँदै पुन बन्द
श्रीदेवीकी छोरी जान्ह्वी कपुरमा अचानक चढेपछि…
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २७, २०७७ समय: ११:५४:५२
भूत भन्ने बित्तिकै सबैलाई डर नै लाग्ने गर्छ । सानो होस् या ठूलो भूतको नामबाट डराउँछन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । रिलमा देखिने भूतको अवतारले पनि मान्छेलाई उत्तिकै डर दिन्छ जति रियल लाईफमा कुरा गरिने भूत किन नहोस् । जब कि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
रिलमा देखिने भूतलाई मेकअपले बनाईएको हुन्छ । तरपनि जब पर्दामा देखिन्छ तब त्यो सबै मेकअप नै हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि डर लाग्छ । बलिउड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर पनि यस्तै डराउने लुक्समा फिल्म ‘रुही’मार्फत दर्शकमाझ आउदैछिन् । फिल्ममा शरीरमा आत्मा बसेको एक युवतीको भूमिकामा जाह्नवी देखिँदैछिन् ।
आजतकमा प्रकाशित समाचारअनुसार जाह्नवीले प्रोस्थेटिक्स मेकअपको प्रयोग गरेकी छन् । फिल्ममा सुपर नेचुरल पावर देखाउनका लागि भीएफएक्सको पनि प्रयोग गरिएको छ ।
फिल्मका निर्देशक हार्दिक मेहताले प्रोस्थेटिक्सपछि दृश्य सुट गर्नका लािग घण्टौ पर्खनु परेको खुलाए । ‘जाह्नवीको लुक्स पास गर्नका लागि उनले १० लुकको टेस्ट दिएकी थिइन्’, हार्दिकले भनेका छन् ।
हार्दिकका अनुसार जाह्नवीले चुँ डे ल जस्तै शारीरिक हाउभाउ र आवाज फिल्ममा देखाएकी छन् । गत सोमबारमात्र जाह्नवी र राजकुमार रावले फिल्मको विशेष शो राखेका थिए । यो शोमा फिल्मको कलाकार तथा प्राविधिकसहित केही विशेष पाहुना बोलाइएको थियो । फिल्म हेर्न जाह्नवीले आफ्नो सहायकको परिवारलाई पनि बोलाएकी थिइन् ।
Last Updated on: March 11th, 2021 at 11:54 am
४५१ पटक हेरिएको
टिकटक क्विन’ रेश्माको विवाहमा वर्षाको रमाइलो, को को पुगे विराटनगर ?
जहाँ महिलाले ब्रा र पे न्टी नै लगाउन नपाइने अनौठो चलन”
विदेशमा हुँदा जेठाजुसंग सुतेर बच्चा जन्माइन्,अहिले यस्तो सहमति गरेपछि गाउँ नै छक्क पर्यो (भिडियो हेर्नुस्)
बन्चरोले हा नेर मा र्ने भाउजुले दिए बयान,ब लात्कार गर्न खोजेपछि मा र्न बाध्य भयौं भने (भिडियो हेर्नुस्)
मलाई केपी ओली एकदमै मन पर्नुहुन्छ : रेखा थापा